Dhugummaa suuraawwan toora midiyaalee hawaasaarratti maxxanfamanii akkamiin mirkaneeffanna? – ኢትዮጵያ ቼክ
Dhugummaa suuraawwan toora midiyaalee hawaasaarratti maxxanfamanii akkamiin mirkaneeffanna?
Guyya guyyaan odeeffannoowwan heddu barreeffamaan, suuraan akkasumas suur-sagaleen gama miidiyaalee hawaasaa akka Feesbuukii, Twiitara, Yutiyuubii fi kunneen birootin tamsa’u.
Haa ta’u malee odeeffannoowwan tamsa’an hundi sirriidha /dhugaadha jechuu miti.
Suuraawwanfi viidiyoowwan iddoo tokkotti waraabaman akka waan iddoo biraatti waraabaman fakkeessun kan maxxanfaman heddu.
Marsariitiiwwanfi mosaajiwwan /applications/ dhugummaa (sirrii ta’uu) suuraawwan mirkaneeffachuuf akkasumas waa’ee suuraa tokkoo odeeffannoo argachuuf nugargaaran heddutu jiru. Kunneen keessaa muraasni:-
1.Tinaay (TinEye): marsariitiin kun intarneetiitti fayyadamuun waa’ee suuraa tokkoo beekuf yookin mirkaneeffachuuf nugargaara. Jalqaba suuraa mirkaneeffachuu barbaadnu bilbila yookin kompiitara keenya keessaa qabaachuu qabna. Fakkeenyaaf suuraa Feesbuukirra jiru yoo ta’e suuricha bilbila yookin kompiitara keenyarratti ‘download’ goona. Itti aansun marsariittii www.tineye.com jedhu keessa seenun suuricha galchina (‘upload’ goona). Sana boodas marsariitichi suuraa irratti feene /upload goone/ akka nuf barbaadu cuqaasna. Marsariitiin ‘TinEye’ jedhamu kunis suurichi kuusaa isaa keessa jiraachusaa barbaadun suurichafi suuraawwan biroo isa fakkaatan nuf tarreessa. ‘TinEye’ suuraan nuti mirkaneeffachuu barbaadnu kanaan dura yoom fi eessatti faayidaarra akka oole nutti agarsiisa. Marsariitiin www.tineye.com kaffaltii malee bilisaan fayyadamuu kan dandeenyudha.
2.‘Google Reverse Image Search’: marsariitiin ‘Google’ akkuma ‘TinEye’ suuraawwan yoomifi eessatti faayidaarra akka oolan beekuf nugargaara. Jalqaba marsariitii https://images.google.com/ keessa seenun eegalla. Itti aansunis suuraa bilbila ykn kompiitara keessaa qabnu galchuun (‘upload’ gochuun) ‘barbaadi’ kan jedhu cuqaasna. Marsariitichis suuraa nuti ‘upload’ goone barbaadun isaafi suuraawwan biroo isa fakkaatan nuf tarreessa. ‘Google Reverse Image Search’ suuraa qofa osoo hintaane geessituu (link) suuraa galchuunis suuraa barbaadu nudandeessisa.
3.Footo Foorensiks /FotoForensics/: marsariitiin kun suuraan tokko ‘photoshop’ yookin mosaajii biraatti fayyadamuun bocni, halluufi qulqullinnisaa jijjiiramuufi jijjiiramuu dhiisusaa kan nutti agarsiisudha. Footo Foorensiiksitti fayyadamuuf jalqaba bilbila yookin kompiitara keenyaan marsariitii www.fotoforensics.com jedhu barbaadna. Itti aansunis suuraa yookin geessituu /link/ suuraa mirkaneeffachuu barbaadnu galchina. Marsariitichis suuraa ‘upload’ goone cinatti suuraa biraa nutti agarsiisa. Nutis halluu suurichaa ilaalun suurichi akkaataa jalqaba itti turerraa jijjiramuusaa beekuu dandeenya.
4.Marsariitii ‘Jeffrey’s Exif Viewer’: Marsariitiin kun waa’ee suuraa tokkoo odeeffannoowwan garaagaraa argachuuf nugargaara. Innis suuraa mirkaneeffachuu barbaadne marsariitii http://exif.regex.info/exif.cgi jedhu keessa galchinee barbaadun odeeffannoo arganna. Odeeffannoowwan marsariitii kanaan argachuu dandeenyu keessaayis sa’aafi guyyaa suurichi itti kaafame, gosa kaameeraa suurichi ittin kaafame akkasumas iddoo suurichi itti kaafame isaan muraasa.